Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Obamacare: Si Sahal Ah U hel Caymiska Daryeelka Caafimaadka
Ka warqabka caymiska Obamacare iyo kabitaannada khidmadaha ayaa ah mid aad u hooseeya marka loo eego tirada ballaaran ee muwaadiniinta Mareykanka. Waxaan garwaaqsanahay in dad badan ay weli ku adag tahay sidii ay si sahlan u codsan lahaayeen Obamacare.
Shantii sano ee ugu horeysay, kaliya 16 milyan oo Maraykan ah ayaa helay caymiska caafimaadka ee Xeerka Daryeelka La awoodi karo (ACA), kaas oo aan u aragno mid hooseeya marka loo eego tirada dadka Mareykanka.
Xeerka Daryeelka Lacagta La-Beddelayo (ACA), oo sidoo kale loo yaqaan Obamacare wuxuu u oggolaanayaa kuwa aan caymiska lahayn inay awood u yeeshaan inay ka helaan qorshe caymis caafimaad oo la awoodi karo iyada oo loo marayo Goobta Suuqa, oo leh kayd ku salaysan dakhligooda iyo xajmiga qoyska. Sida laga soo xigtay warbixino kala duwan, da'yarta qaangaarka ah waxay sameeyeen boqolkiiba badan dadkan cusub ee caymiska shantii sano ee ugu horeysay.
Waa maxay Obamacare?
Ilaalinta Bukaan-socodka waxa sidoo kale loo yaqaan Xeerka Daryeelka Lacagta La-Beddelayo oo caan ku ah ObamaCare waa magaca guud ee caymiska caafimaadka suuqa kaas oo uu si aad u jaban kuugu sameeyo Xeerka Daryeelka La awoodi karo.
Celcelis ahaan qorshaha Obamacare wuxuu u dhexeeyaa $328 ilaa $482 sannadkii laakiin wuu kala duwan yahay iyadoo ku xidhan shirkadda, nooca qorshaha, iyo meesha aad ku nooshahay. Oo waa in aad ka warqabto in kaliya $45/bishii, aad heli doonto booqashooyin daryeel oo degdeg ah oo jaban, warqado la dhimay, iyo shaybaadhka isla maalintaa ah. I raac maqaalkan si aad u aragto sida loo codsado Obamacare habka ugu fudud.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Obamacare
Mid ka mid ah yoolalka Obamacare waa in la dhimo kharashka Medicare iyo Medicaid taas oo macnaheedu yahay haddii aad iibsatay caymiska Obamacare iyo haddii kale, sharcigu mar hore ayuu saameyn kugu yeeshay hal ama si kale.
Hal sabab ayaa ah maadaama dowladda federaalku ay ku bixiso $1.27 tiriliyan daryeelka caafimaadka oo keliya, markaas daryeelka caafimaadku wuxuu ku kacayaa dawladda Mareykanka in ka badan kharashka Lambarka Bulshada $1.15 tiriliyan.
Obamacare waxa uu qasab ka dhigay cisbitaalada, takhaatiirta, iyo farmashiistayaasha in ay u wada shaqeeyaan siyaalo aanay waligood hore u samayn. Way isbedelaysaa sida daryeelka caafimaadka loo bixiyo.
Tusaale ahaan, sida Obamacare u shaqayso waa in dhammaan diiwaanada caafimaadka lagu duubo si elektaroonik ah halkii warqad lagu qori lahaa. Sidoo kale, in Medicare uu bixiyo isbitaallada iyadoo ku saleysan sida ugu wanaagsan ee qofku helo, beddelka inta baaritaan iyo habraac ay dhakhaatiirtu qoraan.
ObamaCare bilaash maaha. Dad badan ayaa u maleynaya in ObamaCare uu xor yahay sababtoo ah fikradahooda daryeelka caafimaadka caalamiga ah waa "daryeel caafimaad oo bilaash ah." Daryeelka caafimadka caalamiga ah waa erey ay siyaasiyiintu adeegsadaan sababtoo ah waxay u dhawaqayaan inay ka wanaagsan yihiin "waa waajib caymis oo khasab ah". Qof kasta waxaa looga baahan yahay inuu haysto (iibsado) caymis, marka qof kastaa waa inuu lahaadaa caymis daryeel caafimaad oo jaban.
Obamacare ma wada qummana laakiin waxa ay ku socotaa wadadii saxda ahayd. ACA waxay ku xiran tahay isbedel sanad walba; waxaan leenahay sharci-dejin ayaa marba marka ka danbeysa la soo saaro. Halkan waxaa ah faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Xeerka Daryeelka Lacagta La-Beddelayo.
Caymis caafimaad oo la awoodi karo oo dad badan
Inkasta oo caymiska caafimaadku aanu weli bilaash ahayn sinaba, dadku hadda waxay haystaan ​​doorashooyin caymis oo ballaadhan. Shirkadaha caymisku waa inay hadda ku bixiyaan ugu yaraan 80 boqolkiiba khidmadaha caymiska daryeelka caafimaadka iyo hagaajinta. ACA waxay kaloo rabta inay ka hortagto caymisyadu inay sameeyaan koror aan macquul ahayn.
Kharash yar oo dawooyinka la qoray
Sida laga soo xigtay a Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid war-saxaafadeedka laga bilaabo 2017, ka-faa'iideystayaasha Medicare waxay badbaadiyeen in ka badan $26.8 bilyan daawooyinka laguu qoro ee Obamacare, markaa intee in le'eg ayaa la badbaadiyay sanadkan. Kahor dad badan, gaar ahaan dadka waayeelka ah, ma awoodaan inay iska bixiyaan dhammaan dawooyinkooda. Tirada dawooyinka la soo qoray iyo kuwa guud ee ay bixiso ACA ayaa sii kordheysa sanad walba.
Baaritaanno badan ayaa la daboolay
Obamacare waxay dabooshaa baaritaanno badan iyo adeegyo ka hortag ah. Kuwaani badanaa waxay leeyihiin lacag-bixin yar ama wax-ka-jaris. Adigoo rajeynaya in haddii aad si firfircoon uga jirto daryeelkaaga caafimaadka, aad ka fogaan karto ama aad dib u dhigi karto dhibaatooyinka caafimaad ee waaweyn hadhow. Macaamiisha caafimaadka qaba waxay u horseedi doonaan kharashyo yar ka dib. Tusaale ahaan, baadhista xanuunka macaanka iyo daawaynta hore waxay kaa caawin kartaa ka hortagga daawaynta qaaliga ah iyo daawaynta culus ee hadhow.
Dadku waa inay wax badan ka bixiyaan khidmadaha
Xeerka daryeelka la awoodi karo ayaa sababay in khidmadaha ay kor u kacaan dad badan oo horey u lahaa caymis caafimaad. Shirkadaha caymisku hadda waxay bixiyaan faa'iidooyin kala duwan waxayna daboolaan dadka qaba xaalado hore u jiray.
Canshuurtu kor ayey u kacaysaa
Si loo caawiyo bixinta Obamacare, dhowr canshuur oo cusub ayaa la ansixiyay, oo ay ku jiraan canshuuraha qalabka caafimaadka iyo iibinta daawooyinka. Canshuuraha ayaa sidoo kale lagu kordhiyay dadka dakhligoodu sarreeyo marka loo eego celceliska Mareykanka. Maalgelinta sidoo kale waxay ka timaadaa kaydka lacagaha Medicare.
Diiwaangelinta qoyska saxda ah ama caymiska ganacsiga waxay noqon kartaa mid dhib badan
Mareegta Obamacare ayaa markii hore haysatay dhibaatooyin farsamo oo badan. Tani waxay adkeysay dadka inay isdiiwaangeliyaan waxayna keentay dib u dhac iyo saxiixyo ka hooseeya sidii la filayay. Dhibaatooyinka websaydka ayaa ugu dambeyntii la hagaajiyay, laakiin macaamiil badan ayaa ka cawday in u saxiixida qoyska saxda ah ama caymiska ganacsiga ay noqon karto mid dhib badan laakiin hadhow waxaan ku tusi doonaa sida fudud ee loo dalbado Obamacare.
Ganacsiyada ayaa jaraya saacadaha shaqaalaha Obamacare awgeed
Marka loo eego ganacsiyada ACA ee leh 50 ama in ka badan oo shaqaale waqti-buuxa ah waa inay bixiyaan caymis ama bixiyaan lacag si ay u daboosho kharashyada daryeelka caafimaadka shaqaalaha. Marka la dhimo saacadaha, ganacsiyadu waxay heli karaan qeexida 30-saac todobaadkii ee shaqaale waqti buuxa ah.
Sida loo Codsado Obamacare
Si aad kaaga caawiso in habka codsigaaga uu noqdo mid sahlan oo degdeg ah, waa in aad xogtan diyaar u tahay ka hor inta aanad bilaabin codsigaga.
Sidoo kale, ogow inaadan u baahnayn dhammaan macluumaadkan haddii aad codsanayso caymis la'aan kayd.
Cinwaannada guriga iyo/ama boostada ee qof kasta oo codsanaya caymiska
Nambarada Sooshal Sekuuritiga (SSNs) ee qof kasta oo codsigaga ku jira
Macluumaadka ku saabsan xirfadlaha kaa caawinaya inaad dalbato (haddii ay jirto)
Macluumaadka dukumeenti socdaalka (tani waxay khusaysaa oo keliya muhaajiriinta si sharci ah u jooga)
Macluumaad ku saabsan sidaad u xarayn lahayd cashuurahaaga
Loo-shaqeeyaha iyo macluumaadka dakhliga ee qof kasta oo qoyskaaga ka tirsan
Qiyaastaada ugu fiican ee dakhliga qoyskaaga
Macluumaadka caymiska caafimaadka hadda
Aaladda Daboolista Loo-shaqeeyaha oo dhammaystiran (Tani waxay khusaysaa oo keliya haddii qof qoyskaaga ka tirsan uu haysto ama uu u qalmo caymiska loo-shaqeeyaha)
Habaynta Kharashka Bixinta Caafimaadka (tani waxay khusaysaa keliya haddii qof qoyskaaga ka tirsan la siiyo HRA iyada oo loo sii marayo cidda ay u shaqayso)
Sida loo Codsado: 4 tillaabo fudud
Haddii aadan aqoon sida loo codsado Obamacare, afartan tillaabo ee fudud waxay kuu noqon doonaan hage weyn. Waxaa ka mid ah:
1. Samee koonto
Marka hore bixi qaar ka mid ah macluumaadka aasaasiga ah. Taasi waa sababta aan kugula talinay macluumaadka waa inaad diyaar u ahaataa macluumaadka kor ku xusan ka hor intaadan bilaabin codsigaaga. Kadib dooro magaca isticmaale, erayga sirta ah, iyo su'aalaha amniga ee ilaalin dheeraad ah.
2. Codso caymiska goobta suuqa
Geli macluumaadka adiga iyo qoyskaaga, oo ay ku jiraan dakhligaaga, tirada qoyskaaga, iyo in ka badan. Isticmaal talooyinka macluumaadka ee a ilaa k si aad u hubiso in wax walba ay sax yihiin oo ku salaysan macluumaadka aad u baahan doonto. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad codsato Obamacare adiga oo aan dhibaato badan haysan.
3. Dooro qorshe
Marka xigta, waxaad arki doontaa dhammaan qorshayaasha caymiska caafimaadka iyo barnaamijyada aad u qalanto oo is barbar dhig. Waxaad isla markaaba bilaabi kartaa nidaamka codsigaaga 2022 adiga oo is barbar dhigaya qorshayaasha iyo qiimayaasha Daryeelka Caafimaadka.gov.
Dooro qorshe caymis caafimaad oo buuxinaya baahiyahaaga oo isdiiwaangeli! Hadda waa wakhtiga ugu fiican ee aad bilaabi lahayd codsigaaga 2022. Xusuusnow in gobolada qaar sida California ay wali socoto. Waxa kale oo aad samayn kartaa su'aalo ku saabsan in codsiyada ay weli ka socdaan gobolka aad degan tahay.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo arjigaaga Suuqa, waxaa jira dad loo tababaray oo shahaado siinaya inay kaa caawiyaan inaad fahanto doorarka caymiskaaga oo ay kugu diiwaan geliyaan qorshe gobol kasta. Oo xusuusnow inaad wakhti kasta kula xidhiidhi karto telefoon ama si toos ah ula sheekeysan karto (healthcare.gov) si aad kaaga caawiso su'aasha Caymiska Suuqa.
Waa maxay Kharashka Obamacare?
Obamacare waxa uu ka dhigay qorshayaasha caymiska caafimaadka mid la awoodi karo marka la isku dhaafsado suuqa caymiska caafimaadka dadweynaha. In kasta oo aysan jirin qorshooyin gaar ah oo qof walba ah, kaliya xulashooyin badan oo la awoodi karo iyada oo loo marayo shirkado kala duwan. Qorshayaasha Obamacare way ku kala duwan yihiin qiimaha iyadoo ku xidhan shirkadda, nooca qorshaha aad doorato, iyo meesha aad ku nooshahay. Celceliska kharashka bisha ee qorshaha suuqa caymiska caafimaadka dadweynaha wuxuu u dhexeeyaa $328 ilaa $482 sannadkii.
Waa maxay xilliga diiwaangelinta furan?
Xilliga Is-diiwaangelinta Furan (OEP) waa xilliga ay dadku isku qori karaan qorshaha caymiska caafimaadka sannad kasta. Inta badan gobolada, tani caadi ahaan waa laga bilaabo Noofambar 1 ilaa Diseembar 15, qorshuhuna ma dhaqan galo ilaa Janaayo 1 ee sanadka soo socda. Sidaa darteed, had iyo jeer ma heli doontid caymis caafimaad isla markaaba, taas oo ku xidhan marka aad codsato. Haddii aad seegto OEP, waxaad codsan kartaa qorshe caymis caafimaad oo gaaban ilaa muddada dib u furmayso sanadka soo socda. Tan waxa la iibsan karaa ilaa 364 maalmood.
Ma heli karaa Obamacare haddii aan waayo shaqada?
Dabcan, waad awoodaa. Xitaa haddii aad lumiso shaqadaada, waxaad weli xaq u yeelan doontaa inaad codsato caymis xilliga Diiwaangelinta Gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii dakhligaaga sanadlaha ah aad hoos ugu dhaco, waxaa laga yaabaa inaad ugu dambeyntii u qalanto inaad Medicaid ka hesho dawladda gobolkaaga.
Xitaa haddii aadan weligaa maqlin Obamacare maqaalkani wuxuu ka hadlay dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato Sharciga Daryeelka La awoodi karo (ACA). Waxaan sidoo kale qeexnay tillaabooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee ka dhigi doona habka codsiga adiga kuu fudud oo degdeg ah, isku day inaad inta ugu fiican barato dhammaan aasaaska qorshayaasha caymiska caafimaadka ka hor intaadan dooran midka kugu habboon. Waa in ay kuu ahaato wax dheeraad ah si aad u ogaato in dakhliga saxda ah ee aad soo gudbiso uu yahay dakhligaaga guud ee la hagaajiyay.
Tan iyo markii ay dawladda federaalku sheegtay in sanadka 2022, celceliska khidmadaha ayaa hoos u dhacay celcelis ahaan $ 30 qofkiiba bishii iyo ka-goynta dhexdhexaadka ah ayaa hoos u dhacay 90%, laga bilaabo $ 450 ilaa $ 50 / sannadkii markaa hadda waa wakhtiga ugu fiican ee lagu boodi karo codsiga habka.
10 + Caymiska Caafimaadka ugufiican ee loogu talagalay dhalinyarada qaangaarka ah
7 Caymiska Caafimaadka ugu Fiican Texas 2022
Dib u eegisyada Caymiska Caafimaadka Oscar 2022: Ma sharci baa mise waa khiyaamo
10 Isteek ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Xitaa haddii aad tahay waalid guriga jooga, weli waxaad qiimo u leedahay qoyskaaga dhaqaale ahaan. Isagoo u malaynaya inaad mas'uul ka tahay…
TaxAct Review 2021: Sida ay u shaqayso | Diyaarinta Canshuurta Bilaashka ah & Qiimaha Jaban
Iyadoo TaxAct inta badan si khaldan loo fahmo, ama si ka sii wanaagsan, loo qaato ikhtiyaarka "qiim-dhimista" marka la barbardhigo canshuurta kale…
Caymiska soo socda waa shirkad caymis dhijitaal ah oo carqaladeysa oo siisa milkiileyaasha ganacsiga yar -yar awood ay ku iibsadaan…